150CM Irontech Doll Naasaha Weyn Dadka Waaweyn Payton Tan Maqaarka
Dolls Galmo Jinsi ah,Caruusadaha qaabka yurubiyanka ah,D koobabka caruusadaha galmada,Caruusadaha galmada caato ah,Caruusadaha galmada Anime
Payton - Naasaha waaweyn 150CM Dadka waaweyn Anime Irontech Dolls
Sheekada taariikhda Payton:
Payton waa caruusad jinsiyeed TPE ah oo dhererkeedu yahay 150cm. Markii ay ku bilawday afeef igu qaawinta afkeeda waxaan dareemay in fuushu bilaabmayso kubbadayda waxaanan uga digay Jenn inay joojiso inay rabto mooyee inay kala doorato candhuuf ama liqitaan.
❤ Boonyadayada dhabta ahi waxay ka samaysan yihiin TPE caafimaad oo ammaan ah oo aan sun ahayn, taas oo ku dhow sida ugu jilicsan dadka dhabta ah.
❤ Waxaan haynaa xulasho ballaaran oo xulashooyin ah Caruusadaha Irontech cabirro iyo qaabab kala duwan.
brand: Caruusadaha Irontech
Dhererka ： 150cm